जलविद्युतमा एक दिनमै सन्ताउन्न करोड बढीको लगानी प्रतिबद्धता - TV Annapurna
ऊर्जा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्न लागेको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रममा नागरिकहरुको उच्च आकर्षण देखिएको छ । मन्त्रालयले सोमवार अनलाइनमार्फत जलविद्युत्मा लगानी आह्वान गर्दै वेबसाइट उद्घाटन गरेको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार आज साँझसम्म रु. ५७ करोड ६४ लाख ९४ हजार ४ सय ८१ बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले स्वदेशी लगानीमा नै जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने भन्ने लक्ष्यका साथ अनलाइनमाफत नागरिकको प्रतिबद्धता खोजेको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माका स्वकीय सचिव वसन्त शर्माका अनुसार आज साँझसम्म नौ हजार १ सय ६५ जनाले लगानीको प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
हालसम्म संस्थागत लगानीका लागि छ कम्पनीले लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यसमा संस्थागत लगानी रु. दुई करोड ४६ लाख २५ हजार रहेको छ ।
नापी कार्यालयका अधिकृत घूससहित झा पक्राउजर्मनीका पूर्वराष्ट्रपतिको निधन